TOP 15 mitambo ye iPhone | Iyo mitambo yakanakisa !! | IPhone nhau
Luis del Barco | | IPhone mitambo
Iwe uri mumwe wevaya vanoda kuve nenguva yakanaka nemitambo pane yako iPhone? Zvakanaka, kuti iwe usatambise nguva yakawanda uchitsvaga mazita akanaka kune yako smartphone, isu taida kuita sarudzo nezvatinofunga ndiyo mitambo yakanakisa ye iPhone. Tsvaga yedu TOP 15 mitambo ye iPhone!
Kunyangwe, hongu, tinokuyambira kuti zvimwe zveizvi zvinogona kunyanya kupindwa muropa.
1 Nei TOP 15 mitambo ye iPhone?
2 Taxy anopenga
3 Alto's Kuzeza
8 Steppy bhurukwa
9 Blitz bhurigedhi
10 Lego Star Wars: Simba Rinomutsa
11 Ruvara Chinja
12 Real Racing 3
Nei TOP 15 mitambo ye iPhone?
Zera redhijitari ratipa zvakawanda kana zvasvika kumitambo yemavhidhiyo. Kubva kumamashini ekutanga eArcade kusvika ikozvino, maawa mazhinji akaiswa mari mukutamba mazita akasiyana - mamwe acho atova ngano- pamapuratifomu akasiyana akaigadzirirwa iwo. Nekusvika kweanowedzera simba mafoni emafoni muhomwe, vagadziri vawana nzira nyowani yekusunungura kugona kwavo, uye isu, nzira nyowani yekunakidzwa nemitambo pane edu mascreen kwese kwatinoenda.
Kupihwa kwemazita atinogona kuwana panguva ino muApp Store maererano nemitambo kwakakura, saka, isu Isu taida kuita sarudzo yeavo vatinofunga kuti ndiyo yakanakisa kuva nenguva yakanaka ne iPhone yedu, zvekuti kushushikana kwenguva yemahara hakuchina nzvimbo muzuva redu zuva nezuva.
Kana iwe uchida vhidhiyo iyi uye uchida kuve unofambirana nezvose zvatinovhura paYouTube ipapo iwe unofanirwa kunyorera. Wakamirira chii?. Unofanira chete tinya pano.
Yakasarudzika yemitambo yeArcade pane yedu iPhone. Chiratidziro chakanaka icho mifananidzo haisi zvinhu zvese, Kutibvumidza kushandisa maawa emafaro akachena kutora vatengi vedu kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
Crazy Taxi Yakasarudzikavakasununguka
Chiitiko chekuona mune yakasarudzika fomu. Hausi chete mutambo patinoisa muganho, asi zvakare kuiridza chiitiko chinonakidza kwazvo yenguva dzekuzorora nerunyararo.
Edza kutungamira Ida parwendo rwake kuburikidza nezviitiko mauri iweIwe uchafanirwa kudzosera uropi hwako kana iwe uchida kubuda kubva kune anoonekwa enigmas ayo anounza. Chenjera, zvinoita kunge zvakapusa asi hazvisi.
Dhirowa ako akanakisa mashizha, uchaada kana iwe uchida kubudirira. Combos, mabhomba uye vavengi kurova ndizvo zvakakumirira iwe mumutambo uyu uko vanokurumidza uye vane hunyanzvi chete ndivo vanogona kuramba vakamira. Kutema michero zvanzi.
Worm fever! Mutambo unokunda muwebhu vhezheni yayo unogona kuenda newe muhomwe yako, kana uchida. Tungamira honye yako uye mupe chikafu chakanaka kuti aparadze zvasara uye kuva mukuru pane vese.
Kanganwa nezve kuponesa Pasi kubva kunze kwekutyisidzira: zviponese. Mhanya uye unzvenga zvipingamupinyi uye zvombo zvekukwiridzira kuti ufambire kure sezvinobviraIpapo chete ndipo paunogona kuramba uchiwedzera uye kuwana ruzivo.
Kufara kwakawanda zvekuti kuno perera pane zvisina musoro. Tungamira hunhu hwako kuburikidza neiyo tile nzira yero kuve wakangwarira kuti usatsike pamipaka pakati peimwe neicho. Kana ukadaro, iwe uchafa nenzira yakanyanya kusanzwisisika uye iwe unozogona kugovera kufa kwako neGIF pamasocial network. Unofungidzirwa zvakanaka, kufa hakuna kunyanyoipa ...
Kuzvombo! Sarudza iyo mutambo modhi iwe yaunofarira zvakanyanya uyeTamba wega kana pfudzi nepafudzi newaunotamba navo kuti vakunde timu inopikisa mune yakakura online mitambo yevazhinji. Mumwe chete ndiye anogona kuhwina uye iwe unogona kuve mutambi anoona kuti ndeipi nzira iyo inowira.
Lego Star Wars: Simba Rinomutsa
Unonzwa izvozvo here? Iko Simba riri kumuka… Batsira vatambi vakasiyana mufirimu muma adventures ake kuburikidza neGirazi uye anokwanisa kukunda First Order. Kufanana nemazita ese eLego, haugone kuwana akawanda matsva ekuwedzera kana iwe wakambotamba mazita apfuura, asi zvakakodzera kuti uzame.
LEGO® Star Wars ™: Simba Rinomutsavakasununguka
Usarega kurova kwako kuchidedera, nekuti apa kunyatsoita ndiyo shamwari yako yepamwoyo. Chinhu chikuru pamutambo uyu ndiwo maitiro ese aanotipa, tichipa kwakasiyana kwakasiyana kuitira kuti tirege kumbomira kutamba nemavara.
BRRUUUM! Iyo adrenaline yemotokari inomhanya ichagara pane yako iPhone nemutambo uyu. Kutanga kubva pasi uye gadzirira kuzviitira nzvimbo yako pakati pevatyairi vakanakisa venyika kupedzisa kuhwina yakanakisa nhangemutange munhoroondo. Izvo hazviwanikwe kune chero munhu, asi kana iwe ukasatsika pane yekuwedzera haumbofi wakaziva zvaunokwanisa.
Real Racing 3vakasununguka
Mutambo wemukana unobatanidza chimwe chikamu chehurongwa kuona kuti bhodhi harizadzike nematiles. Unganidza zvikwere zvakasiyana pakati pavo uye ramba uchiwedzera mapoinzi kusvikira iwe wakanganisa izvo zvinokupomera kuti utangezve mutambo. Hupenyu hwakadaro.
Edza kuyambuka mugwagwa uye zvipingamupinyi zvakasiyana uine mavara aunofarira eDisney muzvirongwa zvakagadziriswa zvakakwana yeichi chikamu chakakosha cheCrossy Road.
Dzikama, usavhunduke. Izvi zvakakosha kana tichida kurongedza huwandu hwakanyanya hwezvidhinha pasina iwo kuderera uye kudiki. Zvakareruka kwazvo uye, senguva dzose mune izvi zviitiko, zvakare zvakanyanya kupindwa muropa.
Wakamborota here nezvekuve meya weguta hombe? Nemutambo uyu unogona kumhanyisa yako meya (kuiita yakakura kana kuti kwete kunoenderana neako manejimendi) uye gadzira nzvimbo yakanaka yevagari vako kwete chete kuda kugara imomo, asi kukunamatira uye muzvizivise kumhepo ina. Usati wagamuchira chinzvimbo, rangarira: nesimba guru kunouya basa rakakura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo TOP 15 mitambo ye iPhone
Ah amai vangu bixooo
Hezvino kushayikwa kwekuravira kwangu Kwazvino Kurwisa 5! Zvinoshamisa! Uye zvimwe kana iwe uine Gamevice controller!
Pindura kune AJFdZ
Idzi ndidzo nhau dzeIOS 10 Beta 3